Vivaldi 3.4 inosanganisira mutambo unosiya Google's dinosaur kumashure kumashure | Linux Vakapindwa muropa
Vivaldi 3.4 inouya nezvimwe zvinotonhorera maficha, asi mutambo uyo unosanganisira kupfuura vamwe vese
Nguva dzese pavanogadzira iyi browser vanoburitsa vhezheni itsva, pane chimwe chinhu chakakosha kutaura. Mwedzi wapfuura v3.3 kuunzwa Mamiriro Ekuzorora, ayo anotibvumidza kumbomira zviitiko zvese uyezve anoshanda seyekuchengetedza screen. Nguva pfupi yadarika ivo vakatanga Vivaldi 3.4 Uye, kunyangwe iyo isingasanganisi rondedzero yakakura yenhau, inosanganisira imwe inokwezva kutariswa. Ndiwo mutambo, asi mumwe unonakidza kupfuura uya unopihwa neGoogle kana Microsoft mumabhurawuza avo.
Zvine musoro kufunga kuti iri zai reIsita, haugone kuve mutambo unokwikwidza nemazita enyaradzo, asi zvinonakidza kuve mubrowser. Kuti uwane iyo, iwe unongoda kushandisa Vivaldi 3.4 uye isa "vivaldi: // mutambo" mubhari yekufambisa, pasina makotesheni. Panguva iyoyo ichaonekwa Vivaldia, 2D cyberpunk mutambo watinozodzora nemakiyi emakorokoza kana A, S, D uye W kufamba uye N na M kupfura.
Vivaldi 3.4 inosimbisa
Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, Vivaldi 3.4 inosvika nenhau idzi:
Menyu inogadziriswa yemamiriro.
Nguva nenguva eyelash zadza. Izvi zvinogona kugadziridzwa pamwe neinosvika makumi matanhatu ezororo.
Tora zvakananga kunyorera nyowani. Screenshots ikozvino inosanganisira kugona kusvetuka wakananga kuchinyorwa chitsva.
Kugona kusarudza avatar nyowani.
Inotungamira kugadzirwa kweiyo inokurumidza nzira pfupi nzira.
Iye zvino zvave nyore kurongedza tabo.
Mutsva mutambo Vivaldia.
Vivaldi 3.4 ikozvino iripo yekurodha pasi kubva kune yako website yepamutemo yematafura (muDEB uye RPM yevashandisi veLinux) kana kubva kuApple Store neGoogle Play zvitoro zvemafoni nhare. Vashandisi varipo vatove neiyo nyowani vhezheni inowanikwa seyekuvandudza kubva kune yedu software centre.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi 3.4 inouya nezvimwe zvinotonhorera maficha, asi mutambo uyo unosanganisira kupfuura vamwe vese
Isu tava kuona Movistar Plus kubva kuFirefox kana Chrome pasina kuwedzerwa
CodeWeavers CrossOver 20: New Release Pamwe Nezvimwe Zvitsva Zvimiro